Barkadda dabaasha - iSearch
Start Ilmaha & Ilmaha ammaanka sabbaysiinaynaa gacanta
Marka ugu horreysa bilowga xilliga xiga, xilliga xagaaga ee xilliga xagaaga, caruurtu waxay doonayaan inay boodaan biyo qabow. Haddii barkad dabaasha, harada qubeyska, barkada ama barkadda dabaasha, biyaha ayaa jimicsiga carruurta ku jiidaya. Waa in aan marnaba la ilaawin in, dhammaanba, biyaha qoto dheer waa halis khatar u ah carruurta aan lahayn dabaasha. Kuwa aan dabbaasha ahayn, dhinaca kale, horeyba waxay u daadi karaan dhererka biyaha dhawr mitir. sabbaysiinaynaa gacanta ka hortagaan ugu yaraan cunugga isaga oo aan la xakameynin. Si kastaba ha noqotee, barkadaha dabbaasha waxay ku haboon yahiin cunugee, da'ahee ayaa loo isticmaali karaa loona qancin karaa dabaasha dabaasha ee suuqa marka loo eego amniga?
1 Waa maxay barkadaha dabbaasha?
2 Da 'yarkee ayaa ku yaal barkadaha dabaasha?
3 Tayada hoolka dabaasha
4 Sidee ammaan u yihiin barkadaha dabbaasha?
5 Halkee laga isticmaalaa barkadaha dabbaasha?
6 Laga bilaabo iyo miisaankee, miyuu ku dabaalan karaa qoryaha si ammaan ah loo isticmaali karaa?
7 Khatarta amniga waa in la ilaaliyaa marka lagu daro?
Waa maxay barkadaha dabbaasha?
Carruurta aan dabaalan karin ama kuwa hadda wax baranaya inay dabbaalanayaan waa inay isticmaalaan gargaar dabaasha. Tani waxay xaqiijineysaa in dabaasha ay fududahay in waxbarto. Qalabka dabaasha waxaa lagu heli karaa qaabab kala duwan, midabyo iyo tayada. Sida caadiga ah, barkadaha dabbaasha ayaa laga sameeyaa vinyl pre-baari, maaddaama ammaanka iyo tayada waa in ay had iyo jeer ku yaal ugu sareeya liiska. Waxay garowsadaan laba-baalood oo tayo sare leh ee baalalkan sida ku qoran EN13138. Tani waa istaandarada amniga yurub iyo hubinta in waalidiinta ay badanaaba u isticmaali karaan badeecaddooda iyaga oo aan cabsi qabin. Baalasha dabaasha ayaa mar walba la heli karaa iyada oo labadaba lagu dabooli karo dadaal yar oo afka ah. Baalalka waxaa la dhigayaa gacanta sare ee ilmaha. Ujeedadaas awgeed gacmaha cunuga waa la jiidayaa garab. Hubi in baalasha dabbaasha aysan aad u dabacsanayn, maadaama ay gaabin doonaan oo ay ku lumayaan biyaha. Xayawaan xoog leh ayaa sidoo kale ka dhigi kara in lagu qabto barkadda dabaasha ee loogu talagalay cunuga si aan fiicneyn. Rugaha waxaa loogu talagalay inay bixiyaan cunnooyin ku filan si ilmahaagu ugu raaxaysto dusha biyaha iyo inuu sameeyo khibradiisa koowaad ee dabaasha. Caruurta aan waligood biyo ku jirin, waa inay marka hore tijaabiyaan dabaqyada biyaha gacmaha ah oo ay soo qaadaan waayo-aragnimada lagama maarmaanka u ah, adigoo kormeeraya.
Da 'yarkee ayaa ku yaal barkadaha dabaasha?
Caawinta dabbaasha caan ah waxaa lagu sameeyaa qiyaaso kala duwan, waxaana lagu dooran karaa da'da. Qosolka ay ka sameysan yihiin caag ama vinyl iyo jilicsanaanta jilicsan ayaa ka dhigaya dabbaalan taageeraya moodi. Xaalado badan oo baqshiishadu waxay la qabsadaan gacmaha carruurta inteeda badan. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka barkadaha dabaasha ayaa lagu taliyaa markii ugu horreysay ee da'da 36 bilood. Muddada isticmaalka waxay kuxirantahay khibradda dabaasha ee ilmahaaga. Badanaa, barkadaha dabbaasha waxaa loo isticmaalaa ilaa da'da lix ama toddoba sano, mararka qaarkoodna muddo dheer. Isticmaalka baalasha marwalba waa muhiim markaad u maleyneyso in ilmahaagu uusan lahayn dabool ku filan si uu naftiisa kor ugu qaado biyaha. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u ogaato in ilmuhu si madaxbanaan u dabbaali karo biyaha oo uu dareemo ammaan, waxaad yareyn kartaa isticmaalka qalabka dabbaasha. Marka hore, barkadaha dabbaasha waxay u adeegaan sidii taageero anshaxeed, hubiyaan xasillooni iyo cabsida wajiga biyaha.
Tayada hoolka dabaasha
Qalabka dabbaasha waxaa loola jeedaa in la qaado cabsida ilmaha ee biyaha iyo in la barto daba-galka gacanta lagu hayo. Si kastaba ha ahaatee, carruurta marna waa isu tagaan, iyagoo baalashooda ku biyo aan lala joogin biyaha sababtoo ah duruufo lama filaan ah kici laga yaabaa in oo u baahan waxqabadka of swimmer qof weyn. Yaa waa in ay u bartaan baal biyaha had iyo jeer la xasuusto in inkastoo ilmaha siin sabaynta gaar ah, si kastaba ha ahaatee, ku siin damaanad kasta oo ay dhacdo qaraqmeen biyaha. Si kastaba ha noqotee, qalabka dabaasha sida barkadaha dabaasha waxay noqon karaan kaalmo ku filan biyaha marka loo isticmaalo habboon. Intaa waxaa dheer, waa in la ogaadaa in barkadaha dabaasha ay tahay inay haystaan ​​shaabad oggolaansho iyo sifooyin kale oo tayo leh. Lama oggola laba-jeer oo qalabkan daba-galka ah u adkeysan kara xaaladahan. Gaar ahaan fasaxa dalal waxaa laga heli karaa meel u dhow xeebta halkaas oo doomo qubayska, joodariyada hawada iyo accessories kale qubeyska dhimay, inta badan baal biyo raqiis ah iyo dadka saboolka ah ayaa ka muuqda. Xaalado badan, qalabkan gargaarka bani'aadamnimada ma bixinayo amniga dhexdhexaadka ah isla markaana si adag u haysta tayada loo baahan yahay. Qaar ka mid ah badeecadaha ayaa xitaa loo arkaa inay yihiin barkadaha dabaasha ee been abuurka ah, sidaa daraadeed waxaa haboon in aad qaadato feejignaad labaad si aad u hubiso. Qalbi ka soo horjeeda badeecooyinka ku qoran luqadaha shisheeye, waxaana loo isticmaali karaa oo keliya isticmaalka jajabaadka Jarmalka iyo tilmaamaha badbaadada. Way u qalantaa, sida tijaabo ah ayaa muujiyay in baaritaano badan oo ay ku maal-markan wanaagsan a lacag yar si ay ugu dambeyntii ku tuurin sheyga, waafaqsan shuruudaha biyaha iyo shuruudaha ammaanka adkeysan karaan.
Sidee ammaan u yihiin barkadaha dabbaasha?
Sida kor ku xusan, barkadaha dabbaasha maaha dammaanad si looga fogaado shilalka dabaasha. Tani waa ugu horrayn mas'uuliyadda qofka weyn. Sidaa darteed, marnaba ha ka tegin caruurtiina markaad aragto gargaar deg deg ah. Gargaarka xayawaanka tayada sare leh ee qaabka baalasha saboolka ahi waxay bixisaa xirmo sicir ah oo loogu talagalay labada nin. Si ka duwan noocyada hore, qoraallada maanta waxay leeyihiin laba qolal hawada. Xitaa haddii ay qasab noqoto inay waxyeello u geysato, hawadu kama baxsan karto gudaha iyada oo aan awood lahayn. Tani waxay ka hortagtaa in cunugaaga uusan helin wax badbaado oo dheeraad ah iyo inuu hubiyo in barkadaha dabaasha ee tayo sare leh ay ka hortagaan moolka. Intaa waxaa dheer, badanaaba soo saarayaasha ayaa ku rakibaya wax loo yaqaan "valve non-return valve". Gawaarida aan soo laaban waxay sidoo kale ka hortagtaa in hawada ka baxdo iyada oo aan is-fara-galin, sidaas darteedna kor u qaadida ammaanka barkadda dabaasha.
Halkee laga isticmaalaa barkadaha dabbaasha?
Aaladaha dabbaasha oo caadi ah ayaa guud ahaan loo isticmaali karaa halka biyaha lagu soo dabbaali karo. Kaliya hal kormeere ayaa lagama maarmaan u ah in lagu taageero dabaasha ilmaha. Waxaan kugula talineynaa isticmaalka barkadaha dabaasha ee goobaha dabbaasha, maadaama ay tani tahay habka ugu fiican ee lagu qiimeeyo biyaha horay loo sii wadi lahaa. Xaaladdu way ka duwan tahay biyaha duurjoogta ah. Dhibaato ha ahaato haddii aad tahay dabaasha ama webiga, labada biyo, halisaha amniga khatarta ah waa ay u adkeysan karaan, taas oo xaqiijinaysa in nabarka barkadda dabaasha ay wax u dhiman tahay. Iska ilaalinta laamaha ama laamaha, dhagxaanta ama caqabadaha kale ee dabiiciga ahi waxay ku dhici karaan kiiskii ugu xumaa baqshadda dibadda ee baalasha iyo hubi in ilmahaagu u baahan yahay. Isticmaalka barkadaha dabaasha ee badda waa inay had iyo jeer kormeeraan. Xitaa halkan, khataraha sida jilicsanaanta, kalluunka ama ciriiriga kuwaas oo khatar u noqon kara ilmahaaga, taas oo ku xidhan waddanka fasaxaaga. Marwalba u sheeg inaad naftaada u sheegto, halka ilmahaagu isticmaali karo barkadda dabaasha. Xitaa haddii ay la socdaan dabaqyada, caruurtu waa inaysan galin barkada dusha ama meelaha qoto dheer ee biyaha jirka. Qalabka gargaarka degdegga ah looma jeedo in la hubiyo in ilmahaagu aanu qari karin kormeer la'aan. Mar walba hubi in ilmahaagu uusan ka tagin barkad aan dabaasha lahayn ama aag aan dabbaalanayn. Meelahaas oo kale, caruurtu waxay badanaaba ku jiri karaan shaki la'aan, mana haawin khatarta ah in ay dhintaan.
Laga bilaabo iyo miisaankee, miyuu ku dabaalan karaa qoryaha si ammaan ah loo isticmaali karaa?
Isticmaalka miisaanka wuxuu ku xiran yahay dhowr arrimood. Noocyo kala duwan ayaa u oggolaan kara fasalo kala duwan. Sida caadiga ah, barkadaha dabbaasha loogu talagalay carruurta laga bilaabo sanadaha 3 illaa sanadaha 6 waxaa loogu talagalay fasal miisaanka u dhaxeeya 18 iyo 30. Sidaas daraadeed waa lagula talinayaa inaad fiiro gaar ah u yeelato shuruucda u gaarka ah, kaas oo lagu soo bandhigay soo saaraha baakada ka hor intaadan iibsan barkadda dabaasha. Qaar ka mid ah baalasha dabbaasha ayaa noqon kara miisaan aad u weyn, kuwa soo saarayaasha kale xitaa ma bixin karaan macluumaadkan iyo qaar ka mid ah alaabooyinka leh miisaan aad u hooseeya oo ujeedo badan u ah isticmaalka carruurta yaryar.
Khatarta amniga waa in la ilaaliyaa marka lagu daro?
Iska ilaali kaydinta nabdoon ee hoolka dabaasha. Xaddiga qorraxda badan ee qoraxdu waxay keeni kartaa maaddada si ay u noqoto mid jahwareer ah xaaladaha qaarkood. Sidoo kale walxaha fiiqan ama walxaha fiiqan, waa in aan lagu kaydin meel u dhow degaanka dabaasha. Dhamaantood, xeebta caanka ah, waa muhiim in laga xoroobo biyaha laga bilaabo ciidda, sababtoo ah waxay sidoo kale dhaawici kartaa maqaarka haragga ee garabka ama baaluqyada. Gubashada bamka waa in had iyo jeer loo adeegsadaa waddanka la jabiyey si loo hubiyo nabad gelyo.
Maqaalka horeciyaaro teendhadii
Maqaalka xigtamiiska Beddelidda kululeeyaha iftiimeen